2013 April | MoeMaKa Burmese News & Media
ဦးထန်းငိုင်းအွမ်၏ အင်ထာဗျူးအား ပြန်လည်ရှင်းလင်းခြင်း ဆလိုင်းကီးလဲအောမ်း ဧပြီ ၃၀၊ ၂၀၁၃ ဧရာဝတီစာစောင်တွင် မြတ်စုမွန် ၂၀၁၃ ဧပြီ (၂၂) ရေးသားသည့် ချင်းတိုင်းရင်းသားစာပေ ပြန်လည်သင်ကြား ခွင့် ရတော့မည် ခေါင်းစဉ်ဖြင့် သတင်းဆောင်းပါးတပုဒ်ကို...
သံလိုက်အလျင် ကုသိုလ်ရှင် ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) ဧပြီ ၃၀၊ ၂၀၁၃ ကျွန်တော်တို့၏ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)ရှိ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းသည် ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့နေသော ရောဂါဝေဒနာခံစားနေရသော ရဟန်းရှင်လူ မိဘပြည်သူတို့အား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက် မှုပေးနိုင်စေရန်ရည်ရွယ်၍...
ဆိုင်းဝိဇ္ဇာ ရွာစားကြီး စိန်ဗေဒါ သန်းဝင်းလှိုင် ဧပြီ ၃၀၊ ၂၀၁၃ မြန်မာ့ဂီတအကြောင်းပြောလျှင် ဆိုင်းဝိုင်းအကြောင်း မပါ၍ မဖြစ်ပေ။ ဆိုင်းဝိုင်းသည် မြန်မာ့ဂီတနှင့် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုတွင် အရေးပါသော အခန်းက ပါသောကြောင့် ဖြစ်သည်။...
ဘ၀ … ကဗျာ ကမာပုလဲ ဧပြီ ၃၀၊ ၂၀၁၃ ကျနော်၏ စာသင်ခန်းထဲတွင် ကျောက်သင်ပုန်း အကွဲတချပ်ရှိခဲ့၏။ ထို … ကျနော် မခွဲခဲ့သော ကျောက်သင်ပုန်း အကွဲတချပ်ကြောင့် ကျနော့် မုန့်ဖိုးကလေးများအား...
Doing business in Ygn (service & Mfg) ဇော်အောင် (မုံရွာ) ဧပြီ ၃၀၊ ၂၀၁၃ North Dagon Industrial Park မြန်မာပြည်မှာတော့ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းလိုင်စင်များနဲ့ပဲ...
ယူးယောက် ချီကာဂို ဘော်စတွန် ဗမာကဗျာဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှု (မေလ ၂၀၁၃) ပေးပုို့သူ – နုိုင်ဦးညို ဧပြီ ၃၀၊ ၂၀၁၃ ယနေ့မြန်မာပြည်က ခေတ်ပြိုင်ကဗျာဆရာများ ဖြစ်ကြတဲ့ ဇေယျာလင်းနဲ့ ခင်အောင်အေးတို့ ၂...
ကာတွန်းစောငို – ဒါတို့ပြေ ဒါတို့မြေ ဒါ ငါတို့မြေ … ဧပြီ ၃၀၊ ၂၀၁၃
Citizen of Burma (LA) – Invitation Posted
ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် (LA) က ရန်ပုံငွေပွဲနှင့် ၈၈ မျိုးဆက်တွေ့ဆုံပွဲ ဖိတ်ကြားစာများ ထွက်မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ ဧပြီ ၃၀၊ ၂၀၁၃
ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခများ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် အစီရင်ခံစာထွက် မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ ဧပြီ ၃၀၊ ၂၀၁၃ Rakhine Commission Report (Myanmar Version) by Moe Ma Ka
YaeBaw Phoe Than Chaung – Articles
ကျနော် မမေ့တဲ့ လေထီးဗိုလ်အုန်းမောင် ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်း ဧပြီ ၂၉၊၂၀၁၃ ဦးလေး ဗိုလ်အုန်းမောင်ကို ကျနော် ၉-၁၀ နှစ်သားအရွယ်တုန်းက ရန်ကုန်ထောင်ကြီးထဲမှာ ပတမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် တွေ့ဖူးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း ကျနော် ရေးပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျနော့်အဖေ ထောင်ကျနေစဉ်တုန်းက...
Nat Sei – Articles
မြင်ရတဲ့ စိတ် နတ်စည် ဧပြီ ၂၉၊ ၂၀၁၃ “စိတ်ကိုမြင်လို့ရလား ဘုန်းဘုန်း” “ဟေ” မျက်မှောင်ကုတ်စရာမလို၊ စဉ်းစားဖွယ်မရှိ၊ အဖြေကို...
တတိုင်းပြည်လုံး ကုသိုလ်တရား မပွားနိုင်ကြတော့ပါ မောင်လူရေး ဧပြီ ၂၉၊ ၂၀၁၃ အခုလောလောဆယ် လက်ပတောင်းဒေသခံတွေ အလွန်ပူပြင်းတဲ့နေပူကြီးထဲမှာ ငရဲခံနေရသလို နေနေကြရတယ်။ သူတို့ဝန်းကျင်မှာ ငရဲခွေးတွေရဲ့ဟောင်သံ အူသံ၊ ဟိန်းသံ ဟောက်သံတွေလဲ ညံလို့ပေါ့။ ဒီငရဲကို...
မိုးမခ ကျန်းမာရေး မစိုးရိမ်ရပါ မောင်ရစ်၊ ဧပြီ ၂၉ ၊ ၂၀၁၃ သည် သင်စာကို ဖတ်နေရချိန်မှာ မိုးမခ၀က်ဆိုက်ကြီး ထူထူထောင်ထောင်ဖြစ်နေတယ်လို့ မှတ်ပါ။ ဒီစာကို မဖတ်ရဘဲနဲ့ ၀က်ဆိုက်ရှာမတွေ့ဘူးဆိုတာ တွေ့ရင်တော့ မိုးမခလည်း...
Aung Din – Burmese Regime Hluttaw in Perspective 18
(ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၁၄၂၊ ဧပြီ ၂၅ ရက်၊ ၂၀၁၃၊ စာမျက်နှာ ၁၈/၃၂) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် (18) အောင်ဒင် အပိုင်း...
28th April 2013 – MoeMaKa Radio
ဧပြီ ၂၈၊ မိုးမခရေဒီယို ဆစ်ဒနီ မြူနှင်းလွင့်ကြွေ – ရဲရင့်ဝေလွင် စီးရီးသစ် သတင်းတိုထွာ၊ သီချင်းပဒေသာ ဟင်္သာကိုးသောင်း – ရွှေတိုင်ညွန့် နှစ် ၁၀၀၊ ကိုမင်းနောင် ဘော်စတွန်အကြမ်းဖက်မှုအပေါ် အမေရိကန်ပြည်သူတို့ ခံယူချက်များ...
Cartoon Saw ngo – Popular guy of Burma
ကာတွန်းစောငို – ဘိုးတော်စိန်ကို ချစ်တဲ့သူတွေထဲ သူတို့လည်းပါတယ် ဧပြီ ၂၉ ၊ ၂၀၁၃
မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံရောက် “ဒီမိုကရေစီ လူမှုအဖွဲ့အစည်း ညီလာခံ”မှ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များ ကိုယ်စားလှယ်များ ဓာတ်ပုံသတင်းကောက်နုတ်ချက်၊ ဧပြီ ၂၉ ၊ ၂၀၁၃ From .Yingluck Shinawatra facebook
BRFNက မြန်မာတိုင်းရင်းသားရွှေ့ပြောင်းမိသားစုများအတွက် အလုပ်သမားရေး ပညာပေး ကျော်နိုင်၊ ဧပြီ ၂၉ ၊ ၂၀၁၃ ဧပြီလ(၂၇)ရက်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ စနေနေ့ တွင် Burma Refugee Family Network မှ ဦးဆောင်စီစဉ်ပေးသော...
မြစိမ်းတောင်ဆရာတော် တရားပွဲ ဘေးဧရိယာမှာ ကျင်းပ ကျော်နိုင်၊ ဧပြီ ၂၉ ၊ ၂၀၁၃ ဧပြီလ(၂၇)ရက်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ စနေနေ့ တွင် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဘေးဧရိယာ ဖရီးမောင့်မြို့ တွင် မြစိမ်းတောင်ဆရာတော် အရှင်ဇာနေယျ၏ ဓမ္မသဘင်အထူးတရားပွဲကို...
ကာတွန်းကူမိုးကြိုး – ဒီမိုကရေစီ ဂိုး … ဧပြီ ၂၉ ၊ ၂၀၁၃